Mmiri mmiri ara ehi na-ebute tupu oge eruo
N'oge ndụ dum nke ezé ezé, okpukpu abụọ gbanwere. A na-akpọ ezé mbụ nke ezé azụ mmiri ara ehi ma ọ bụ nwa ezé. Maka ndị dọkịta, aha ahụ na-emekarị dịka ezé, ma ọ bụ na-ejighị n'aka. Mgbe mmiri ara ehi arahụ na ezé, na ebe ha na-emesị ghọọ ụmụ amaala. Otú ọ dị, mgbe ufodu ndị nne na nna nwere ike ihu nsogbu dị otú ahụ dịka ezé ezé ezughị okè.
Oge nke ezé na-adịgide adịgide
Akara ukwu: Central incisors - na mmalite nke ọkara nke abụọ nke afọ, n'akụkụ - ọnwa 7, nke anọ n'ime otu afọ ma ọ bụ afọ na ọnwa anọ, ntanye ruo ihe dịka ọnwa 20, ise ezé n'afọ na ọnwa asatọ ma ruo afọ abụọ na ọkara. Eke elu: isi incisors ọnwa 7.5, n'akụkụ ihu na ọnwa asatọ, ezé anọ n'ime afọ ọ bụla ruo ọnwa 16, akwa ụra site na afọ na anọ ruo n'afọ na ọnwa asatọ, nke ise ruo ọnwa 30.
Ihe kpatara ezé mmiri ara ehi na-adịgide adịgide
Ọla ezé mmiri ara ehi na-amalite na mmalite nke uto nke ezé ezé. Usoro nkwụsị nke ezé ezé na-akpata site na resorption nke mgbọrọgwụ nke mmiri ara ehi, ya bụ, mgbọrọgwụ ji nwayọọ nwayọọ na-agbaze.
Site na germination nke ezé na-adịgide adịgide nke na-agafe ọkpụkpụ ahụ ozugbo na anụ ahụ dị arọ nke agba, mgbọrọgwụ nke ezé nrịta kwesịrị ekwesị dị ntakịrị na obere. N'ihi ya, mgbọrọgwụ nke ezé mmiri ara ehi enweghị ike ijide ya n'ime oghere ọzọ, ezé na-ewepụkwa onwe ya n'ebe ọ nọ.
Mmetụta nke ụfụ nke ezé ezighi ezi na uto nke ezé na-adịgide adịgide
Otu n'ime ọrụ dị mkpa nke ezé mmiri ara ehi bụ ebe na-egosi maka ngbanwe nke abụọ, ya bụ na-adịgide adịgide ezé. Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ, dịka ọ na-amalite ngwa ngwa, tụfuo ezé mmiri ara ehi ma ghara ijigide ya, mgbe ahụ na n'ọdịnihu, ezé na-adịgide adịgide nke na-abịa iji dochie ha nwere ike ịghagharị ma ọ bụ ọganihu ha nwere ike ịghọ ihe siri ike.
Mbelata nke ezé ezé nwere ike ime ka ezé na-adịgide adịgide na-eto eto. Tụlee otu ihe atụ nke ịmalite ịda mbà n'obi nke ezé nke abụọ nke nwa.
Na ezé ezé nke ezé, ya bụ, mgbanwe nkịtị nke ezé na-ezighi ezé na ezé ezé, ọ ghaghị inwe resorption nke mgbọrọgwụ nke isi ezé. Ntọala resorption na-ewepụ ebe maka ezé na-adịgide adịgide na-egosi na ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị maka ebe ọ nọ na nkwonkwo. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọnụọgụ abụọ nke mbụ dị tupu ngwụcha nke ọkụ ahụ na-adịgide adịgide, mgbe ahụ ịchọta ya na ebe ahụ na-enyere aka hụ na ọ ga-adịgide adịgide na ebe ziri ezi maka ezé na-adịgide adịgide.
Mana ọ bụrụ na mmiri ara ehi nke abụọ abaalarị n'oge mbụ nke mgbanwe nke ezé, ọrụ ya nke na-egosi ọnọdụ maka ọnọdụ ebighi ebi apụtaghị. N'ihi nke a, ezé mbụ mgbochi mbụ ga-achọ ebe ọhụrụ kwesịrị ekwesị ma malite ịkwaga n'etiti etiti ohere. N'ihi ya, ntakịrị obere ezé nwere ike ịnwụ na-enweghị ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụ na ọ ga-esiri ike imebi nha obere mpempe, ebe ọ na-enweghị ike ịgafe anụ ahụ.
Iji dochie isi ihe ngosi, wepụrụ tupu oge ezé ezé, jiri ngwaọrụ pụrụ iche.
Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume izere iwepụ nha ara ehi na mmalite oge nke mmepe na-adịgide adịgide ma ọ dị mkpa ịchekwa ohere maka ezé na-adịgide adịgide na-esote, ndị dọkịta na-eji ngwaọrụ - onye na-ejide saịtị nke ezé ezipụ. Ngwa a na-agbakwunye otu ezé n'akụkụ ebe e wepụrụ ezé, site na njedebe nke abụọ ejiri waya na ezé si n'akụkụ ọzọ nke ebe efu. Site n'enyemaka nke usoro a (ijigide ebe oghere nke ezé ezighi ezi wepụrụ), a ka nwere ebe maka ụba na-adịgide adịgide na ezé dị nso ga-agagharị, na-ebi ebe onye ọzọ. Ọ na-enyere aka ezé na-adịgide adịgide na ọrụ a chọrọ maka ha. Ngwa dị otú a ga-enyere aka ịghara ịga n'ihu maka mgbazi ezé, dịka nkwado. E wepụrụ onye na-ejide ihe a ozugbo ngwụsị nke ezé na-adịgide adịgide site na chịngọm pụtara.
Ịbawanye nrụgide intracranial n'ime ụmụaka
Ọnụ ọgụgụ lymph mụbara n'ime ụmụ
Kedu ka ị ga-esi ghara imerụ akpụkpọ nwa ahụ na-aga ije n'oge oyi?
Mmanya na-aba n'anya na ụmụaka
Ngwunye ọgwụ maka ụmụaka: ụzọ nke nkwekọ ime mmụọ
Ememe ụtụtụ maka ụmụaka
Rite uru na nsogbu nke solarium maka ụmụaka
Nnukwu ntutu ma dị egwu
Esi esi na walnuts green - nzọụkwụ site nzọụkwụ na foto
Supermodels na-ekerịta ihe nzuzo nke nri ha
Ksenia Sobchak funahụrụ afọ, foto ọhụrụ
Mgbochi na ọgwụgwọ acne n'oge ime ime
Lenten nduku casserole
Hungary achicha Dobosh
Marigolds na-agba akwụkwọ: ụzọ kachasị mfe iji mee ka saịtị ahụ dịghachi
Nyochaa ihe nkiri "Gly Moon"
Ọgwụgwọ na ọrịa imeju
Kedu akụrụ na-ata ahụhụ: mgbaàmà nkịtị
3 ihe mmadu kwesiri ime
Nwoke na-atụgharị uche: ihe ịrịba ama na ngosi
Otu esi eme ndokwa nri abalị maka ndị nne na nna
Esi kpochapụ nsogbu akpụkpọ ahụ ngwa ngwa
Ebee ka eji eji ultrasound mee ihe?
Nri na mkpụrụ osisi kiwi